Robert Gabriel Mugabe - Wikipedia
Robert Gabriel Mugabe (/muːˈɡɑːbiː/; Shona dudzo: [muɡaɓe]; akazvarwa 21 Kukadzi 1924 - 6 september 2019) Chizvarwa chemuZimbabwe, murwi wechimurenga chepiri uye aita nezvematongerwo enyika anga ari mutungamiri weZimbabwe kubvira 1987-2017. VaMugabe vakambo tungamira Zimbabwe vari Prime Minister kubva 1980 kusvika 1987.
Akatungamirira kubva 31 December 1987 –kusvika 21 November 2017
In office18 April 1980 – 31 December 1987
In office18 March 1975 – 19 November 2017
21 February 1924 Kutama, Southern Rhodesia
Sally Hayfron (m. 1961; died 1992)
Mugabe akazvarirwa mumhuri yemaShona yaitambura mu Southern Rhodesia. Akadzidza paKutama College nepa University ye Fort Hare uyezve akazove mudzidzisi mu Southern Rhodesia, Nothern Rhodesia nekuGhana. Mugabe akakura achidzimbikana nemabatirwo aiitwa vanhu vatema nevarungu naizvozvo akatanga kutaura zvinhu zvaisawirirana nehurumende yenguva iyoyo zvinova zvakaita kuti asungwe pakati pemakore 1964 kusvika 1974. Achibuditswa mujeri akabva atizira kuMozambique , bvaanotanga sangano rake re ZANU, rinova rakazorwisana nehurumende ya Ian Smith.
Mugore ra 1980 pasarudzo yemavhoti Mugabe akatungamirira ZANU-PF akava ndiye mukundi kwakugadzika pachigaro cha Prime Minister munguva yakazochinjwa zita renyika kubva mukundi Southern Rhodesia ichizonzi Zimbabwe.
Robert Gabriel Mugabe akaberekwa musi waFebruary 21, 1924 paguta rinonzi Kutama Mission muZimba District ye Southern Rhodesia.  Baba vake, Gabriel Matibiri, vaiva muvezi asi mai vake Bona vakadzidzisa katechism yechiKristu kune vana vomumusha.  Vakanga vadzidziswa mumabasa avo nemaJesititi, chiRoma cheRoma Katurike chakange chagadzira basa.  Bona naGabriel vaiva nevana vatanhatu: Miteri (Michael), Raphael, Robert, Dhonandhe (Donald), Sabina, naBridgette.  Vaiva vezera reZezuru, rimwe remashizha madukuduku echiShona tribe.  Baba vababa vaMugabe vaiva Constantine Karigamombe, vari "Matibiri", munhu ane simba ane simba, uyo akashumira Mambo Lobengula muzana remakore rechi19.  VaJesititi vaive vakangwara zvakanyanya uye pasi pesimba ravo Mugabe akazvidzivirira zvikuru,  paanovawo muKaturike ainamata.  Mugabe akanyanya kuremekedza chikoro,  paakanga ari mwana akavanzika uye ari oga,  achida kuverenga ari oga pane kutamba mitambo kana kufambidzana nevamwe vana.  Akasvereredzwa nevakawanda vevamwe vana, avo vaimuona segwara uyezve se mwana komana wamai. 
Mugore ra 1930 Gabriel akave nekukakavadzana nemumwe wena Jesititi, kuburikidza nemakakatanwa iwayo mhuri yekwaMugabe yakadzingwa munharaunda iyoyo nemurukuru wema French ainzi Baba Jean-Baptiste Loubière. Mushure mekunge vadzingwa vakanogara kure munharaunda iyoyo; vana vakabvumirwa kutenderera mberi kuchikoro, kuona vehukama uyezve ne kudzokera kudzimba dzevabereki vavo imomo ma Kutama. Panguva iyoyo mukoma waRobert anonzi Raphael akashaika , zvaifungidzirwa kunzi afa nechirwere chemanyoka.
Mugore ra 1934 richingotanga ,mumwezve mukoma wa Robert mukuru akashaika zvakare mushure mekunge adya chibage chine poison. Gare gare Gabri akasiya mhuri take achinotsvaga basa muguta guru re Bulawayo. Ndopaakasiya mai vake nevamwe vanin'ina nevakoma vake achizonosangana nemusikana ikoko ndokuzozvara vana vatatu.
Loubiere akazofa ndokubva kwaiswa Baba Jerome O'hea pachigaro chake vanova vakatambira kudzoka kwemhuri yekwaMugabe maKutama. Panguva iyoyo kudzvinyirirwa kwevanhu vatema panzvimbo iyoyo kwaive wakanyanya asi pasi kwekutonga kwa Baba Jerome vaisazvikurudzira.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Gabriel_Mugabe&oldid=91306"
Vakashanda seMakurkota muZimbabwe
This page was last edited on 11 Kukadzi 2022, at 06:20.